37 Voafantina Hiady ny Famaranana Amin’ny SIMA 2015 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Febroary 2015 11:51 GMT
Pikantsarin'ireo miady ny famaranana sarimihetsika 2015. Avy amin'ny tranonkalan'ny SIMA.
Tantara 37 avy amin'ny firenena 35 no tonga any amin'ny tanjona famaranana hotsaraina amin'ny Social Impact Media Awards (SIMA) [Lokan'ny Fampitam-baovao Misy Fiantraikany ara-tsosialy] amin'ity taona ity. Tafiditra ao anatin'ny lohahevitra ny vondrom-piaramonin'ireo nanova taovam-pananahana ao Puerto Rico, ny rotaka tao Haiti ary ny fitsingoan-dia ireo mpifindra monina niainga tany Nizeria nankany Holandy.
Daniela Ko, SIMA Mpanorina sady Lehiben'ny Mpanatanteraka niteny: “Manome endrika sary an-tsaina indray ny famokarana sarimihetsika sosialy sy politika ireo mpamokatra sarimihetsika ireo, Mametraka lasitra vaovaon'ny mangarahara, fahadiovan-tsaina ary ny fahaiza-mamorona ry zareo raha manova ny fakantsariny, ny fitantarany ary rehefa itarina [manova] ny mpanatrika ho lasa fitaovan'ny rariny ara-tsosialy”.
Ny mpandresy tamin'ny Lahatsarim-panadihadiana Tsara Indrindra Nisongadina tamin'ny herintaona dia ny ‘A World Not Ours’ [Tontolo iray tsy antsika] nataon'i Mahdi Fleifel – sarim-panondroana ny tsy fananana firenena sy ny fangidiam-panahy ao amin'ny tobin'ny mpialokaloka Palestiniana iray ao atsimon'i Libanona. Ankehitriny amin'izay fahatelo taonany izay dia nihanaroroka ny SIMA ka lasa fandarahan-tsarimihetsika iraisampirenena sy manangona, manatsonga ary mizara ireo sarimihetsika misy fiantraikany tsara indrindra manerana ny glaoby.
Ny Global Voices dia mpiara-miombon'antoka amin'ny SIMA 2015. SIMA dia tohanan'ny Creative Visions Foundation, G technologies, sy ny Angel Station.